करियर राशिफल: वृष राशीलाई फाइदैफाइदा, कुनकुन राशी छन् लक्कि ? हेर्नुस – Rapti Khabar
करियर राशिफलअनुसार यस पटक वृष राशीका ब्यक्तिलाई मालामाल हुने देखिएको छ ।
यी राशीका ब्यक्तिले आजका दिन लिने निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुनेछ भने तुला राशीका ब्यक्तिका लागी भने कार्यक्षेत्रमा निराशा भोग्नु पर्ने हुनसक्छ ।
अन्य कुन कुन राशीको आज करियर राशिफल कस्तो छ त ?
बिजनेसमा पार्टनरबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा केहि उतार चढाव हुने र कसैका साथ टकराव वा भनाभन हुनसक्छ ।
कुनै पनि निर्णय लिन आजको दिन अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । कार्यक्षेत्रमा आर्थिक लाभ मिल्ने, अगाडी बढ्न परिवारको पुर्ण साथ पाउने दिन हो आज ।
आज सुझबुझका साथ कार्यालयको काम गर्ने समय छ । घर बसेरै कार्यालयको काम हुनसक्छ । वाणीमा सुधार ल्याए आर्थिक लाभ प्राप्त हुनेछ ।
कार्य क्षेत्रमा आज स्यावासी पाउन सकिनेछ । केहि नयाँ कार्य गर्ने रुचिहुनेछ । तपाईको दिन सुन्दर हुने तथा धनलाभको योग छ ।
आजका दिन कार्यप्रति नै ध्यान रहेपनि केहि बाधा तथा अड्चन भने आउने छ । पुर्ण जिम्मेवारीले काम गर्दा पनि खासै राम्रो समय हुने छैन । महिला मित्रको सहयोग मिल्नेछ ।
आफ्नो क्षेत्रमा योग्यता प्रर्दशन गर्ने आज राम्रो दिन हो । आज तपाईको कार्यको प्रशंसा सर्वत्र हुनेछ । धनसंग जोडिएको अधिकाशं समस्या समाधान भएर जानेछ ।
कार्यक्षेत्रबाट आज केहि निराशा भोग्नु पर्ने हुनसक्छ । झझन्टिलो काम गर्नु पर्ने साथै अल्छि लाग्दो समय बिताउनु पर्ने योग छ । तथापी तपाईको कामले भने प्रशंसा पाउने छ ।
आजको दिन निर्णायक र नेतृत्व लिन अगाडी बढ्नु पर्ने उत्तम समय छ । कÞानूनी वा आईटीसंग जोडिएको कार्यमा अद्भुत क्षमता प्रर्दशन गर्ने समय छ ।
आज कैयौं प्रकारका समस्याहरु एक साथ आउन सक्छ । तर यो बेला नआत्ति सोचविचार गरेर मात्र निर्णय लिनु होला । हुन सक्छ तपाईको कार्यक्षेत्र बदलिन पनि सक्छ ।
आफ्नो इच्छा अनुसारको कामगर्दा आउने बाधाबारे सचेत हुनुहोला । यो बेलाअरुको सल्लाह बिना गरिएका कामले राम्रो फल दिनेछैन । ठुलो निर्णय नलिनुहोला ।
आजखासै प्रभावशाली काम हुने दिन छैन । तसर्थ महत्वपुर्ण कामलाई थाति राख्नुहोस् । साना तिना बाकि अधुरा काम सक्नुहोस् । सापटि दिने वा लेनदेनको काम नगर्नुहोस् ।
आर्थिक दृष्टिकोणले आजको दिननिकै शुभ रहेको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा वा भूमिसँग जोडिएको क्षेत्रबाट धनलाभ हुनेछ । केहि झण्झट भने बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।